Isbeddelka Cimilada Dunida: August 2016
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 12:35 PM 2 comments:
Isbeddelka cimilada waxaa looga hortagi karaa midnimo uu muujiyo guud ahaan caalamku, isxilqaan uu dal walbaa qaato mas'uuliyaddiisa iyo dadka oo qof iyo qoys walbaa sida ugu macquulsan u isticmaalo tamarta (energy) uu Ilaahay nagu mannaystay.
Caalamku wa inuu isbeddelka cimilada u midoobo waayo dhibaatada ka dhalan kartaa cid gaar ah looma caleema saarin, sidaa darteedna waa in fikirkan guud ahaan la isla qaato.
Dawladuhuna si loo xaqiijiyo natiijooyin waara oo mira dhal noqda waa inay xaqiijiyaan fulinta heshiisyadii ku aaddanaa isbeddelka cimilada.
Dadkuna, qof iyo qoysba waa inay tamarta u isticmaalaan sida ugu macquulsan, tusaale ahaanna waa in guri walbaa inta joogtaa dhaqaalaysa biyaha, korontada, iyo weliba cuntada. Waxaan dani ku jirin in si israaf ah loo noolaado oo diinteennuna ma ammaanin waa diinteennu waa maslaxadda dunida oo idil.
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 7:58 PM 2 comments: